China Carbomer974 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Le mveliso i-acrylic acid eboshwe i-allyl sucrose okanye i-pentaerythritol allyl ether polymer. Ngokwemveliso eyomileyo, umxholo weqela le-carboxylic acid (- COOH) kufuneka ubengu-56.0% - 68.0%.
Igama leKhemikhali: Umnqamlezo odityaniswe yiPolyacrylic Acid Resin
Ubume beMolekyuli:-I-CH2-CH- N-COOH
Inkangeleko:Umgubo omhlophe omhlophe
Ixabiso le-PH: 2.5-3.5
Umxholo wokufuma%: ≤2.0%
I-viscisiti:30000 ～ 40000 mPa.s
Umxholo weCarboxylic acid%: 56.0-68.0%
Heavy Metal (ipm): -20ppm
Isinyibilikisi eshiyekileyo%: -20ppm
Iimpawu:Inozinzo olusisigxina kwi-viscosity ephezulu, kwaye ilunge ngakumbi kulawulo lomlomo ngenxa yemali encinci yesinyibilikisi eseleyo.
Uluhlu lwesicelo: Kukuhanjiswa kwamachiza ngokuyinxalenye kunye nokutsha, ukulawulwa kokukhutshwa kokulawulwa, kwaye kufanelekile kulawulo lomlomo.
Indlela yokupakisha:10kg ibhokisi
Beka ubomi kwishelufa:iminyaka emithathu
Ukugcinwa kunye nokuThuthwa: Le mveliso ayinabutyhefu, ilinda idangatye, njengokuthunyelwa ngokubanzi kweekhemikhali, zitywinwe kwaye zigcinwe kwindawo eyomileyo. I-Carbomer inokuvelisa ukusebenza ngokuqina okuphezulu kwidosi ephantsi (idosi eqhelekileyo ye-0.25-0.5%), yiyo loo nto kulungiswa i-emulsion, i-cream, ijeli kunye nokulungiswa kwe-transdermal kunye ne-viscosity wide range kunye ne-rheology eyahlukeneyo.
I-Carbomer ayihambelani ne-phenol, i-cationic polymer, i-asidi eyomeleleyo kunye ne-electrolyte ephezulu yoxinzelelo. Ezinye ii-antimicrobial agents kufuneka ziphetshwe okanye zisetyenziswe kwiindawo eziphantsi. Ukulandelela isixa sesinyithi okanye esinye isinyithi sotshintsho kunokubangela ukuthotywa kwe-carbomer ukusasazeka. ICarbomer inokuvelisa ubushushu obuninzi xa inxibelelana nezinto ezinamandla zealkali ezifana neammonia, isodiyam hayidroksayidi, ipotassium hayidroksayidi okanye iiine amine ezisisiseko.
Amanye amachiza anamaqela asebenzayo e-amino angenza iindawo ezinyibilikayo emanzini kunye ne-carbomer. Ngokwesiqhelo, le meko inokuthintelwa ngokulungelelanisa iiparameter zokunyibilika kolwelo kunye neziselo ezifanelekileyo okanye iipolols.
ICarbomer inokwenza iifom exhomekeke kwi-pH kunye nezinto ezithile zepolymer, ezinokuthi zilungelelanise iiparameter zokunyibilikisa kwaye zidlale indima kule meko.
IPolyethylene Glyeol 1500